Israel oo albaabada ka xiratay Margot Wallström - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Margot Wallström wasiiradda arrimaha dibadda Sweden oo ay Israel diidey in waddankeeda ku soo dhaweyso sida madaxda caalamka loo qaabilo. Israel ayaa weli aad uga xanaaqsan aqoonsigii xukumadda cusub ee Sweden siisey Falastiin. Foto: Janerik Henriksson på TT.
Israel oo albaabada ka xiratay Margot Wallström
Wallström ma imaan karto Israel
La daabacay torsdag 15 januari 2015 kl 12.45
Waxay aheyd in maanta Wasiiradda arrimaha dibadda Sweden Margot Wallström booqato dalka Isreal si ay uga qaybgasho seminaar la xiriirey xuska iyo xasuusta Raoul Wallenberg. Laakiin booqashada wasiiradda ayaa la baajiyey iyada oo loo aaneeyey sababo la xiriira jedwelka wasiiradda, sida laga soo xigtay wasaraadda arrimaha dibadda.
Balse sida ay ogaatay laanta Ekot Isreal ayaa diidey in qaabisho Margot Wallström. Sidaas waxaa Ekot u sheegay Emmanuel Nochshon oo ka howl-gala wasaaradda arrimaha dibadda Isreal:
"Wasiiradda arrimaha dibadda Sweden si rasmi ah loogama qaabileen Isreal haday booqasho ku immaan laheyd halkan. Waxay Sweden sameysey ma ahan habdhaqan wanaagsan oo saaxiibnimo, ayuu yeri Emmanuel Nochshon oo ka howl-gala wasaaraddda arrimaha dibadda Israel".
Waxuu sidoo kale xaqiijiyey in haddii Margot Wallström booqasho ku tagi laheyd Isreal aysan qaabilaad kalo kulmi laheyn wasiirka arrimaha dibadda Israel ama ra’iisalwasaaraha dalkas. Waayo buu yeri wax sir ah ma ahan Aqoonsigii Sweden siisey Falastiin in ay Israel u aragto habdhaqan saxiibnimada ka fog.
Wasiirka arrimaha dibadda Margot Wallström ayaa saas oo ay tahay ka fikartay in meelmariso socdaalkeeda ay ku tagi laheyd dalka Israel inkastoo ay meesha ka marnayn laheyd kulamo rasmi ah oo ay la qaadato madaxda Israel. Laakiin sida Ekot xog ku heshay booqashada wasiiradda ayaa markaas ahaan laheyd booqasho iyada u gaar ah. Tas oo tusaale ka micno ahaan laheyd in wasiiradda aysan helin amni sugida lagamo marmaanka ah inta ay ka qaybgalayso seminaarka lagu xusayo Raoul Wallenberg ee ka socda Tel Aviv.
Sida ay u sheegen asbuuc ka hor dublamaasiyiin reer Isreal ah magayadooda gariyey wargeyska Jerusalem Post, dhibaatada ka dhexjirta Sweden iyo Israel waxaa lagu xalin karaa labo siyaabood: middi tahay in Sweden raaligelin ka baxiso afqoonsigii Falastiin ama in Sweden yeelato dowlad cusub.
Laakiin Sweden uma qorsheysana in ay arrintan raaligelin ka baxiso, sida ay u muuqatana dowlad cusub oo Sweden ka dhalataana waxay qaadan doonta ugu yaran 3 sanno iyo dheerad. Wasaaradda arrimaha Sweden ayaa sheegtay in Margot qorshaynayso booqasho rasmi ah in ay ku tagto guga soo socda ka dib marka doorashada Israel ka dhacaysa la soo gabogabeeyo. Balse Emmanuel Nachshon oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Israel ayaan u arag in taas suurogal tahay.
"Booqasho rasmi oo ay wasiiradda arrimaha dibadda ku timado Israel ha sugin, waqti dheer ayey taas in ay dhacdo qaadan doontaa".
Annika Söder, oo ah xoghaya wasaaradda arrimaha dibadda oo saakay la hadlaysay laanta P1-Morgon ayaa ka gaabsatay in ay ka hadsho xogta oranaysa in wasiirka arrimaha dibadda Israel diidey in uu qaabilo Margot Wallström. Waxayse sheegay in aysan doonaynin booq badan in arrinkan laga dhaliyo.
"Margot Wallström nasiib xumo suurtogal uma aheyn in ay la kulanto hogaanka Falastiiniyiinta. Qorshahana waxuu ahaa in ay kulan la yeelato laba dhinac laakiin madaxweyne Abaas ayaa ku qasbanaadey in uu booqasho dibadda ugu banaan baxo. Wasiiradda qorshaheeda sidoo kale waxuu ahaan in ay ka qaybgasho shir lagu xusayey Raoul Wallenberg oo Israel ka socdey. Waano ka xunnahay in aysan suurtogalin ka qaybgalka wasiiradda" ayey tiri.